Indonesia in Focus: Jihad ee dumarka, kuwa buka iyo dadka waayeelka ah (waayeelka) waa Tag Xaaji.
Jihad ee dumarka, kuwa buka iyo dadka waayeelka ah (waayeelka) waa Tag Xaaji.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (359)
(Qaybta saddex boqol iyo konton iyo sagaal), Depok, West Java, Indonnesia, August 30, 2015, 01:34 pm).
Nabiga ayaa sheegay in qof dumar ah jihaadka, kuwa buka, iyo dadka waayeelka ah waxaa la Xajka u socda Mecca, Saudi Arabia.
In maalmihii la soo dhaafay qiyaastii 3 milyan oo Muslimiin ah oo ka badan 100 dal oo 5 qaaradood ayaa madax u ah magaalada Quduuska ah ee Mecca, Saudi Arabia, iyo inuu sii adkeeyo Xajka.
Waxaa socda, fuushan baabuurta, diyaaradaha, Maraakiibta iyo qaar ka mid ah xitaa baaskiil, wax kasta waxaa loo sameeyaa si ay u gutaan yeedhitaanka Ilaah iyo filan abaal marin (salaadda ee u dhigma Haram in ay 100,000 oo jeer) ka badan ajriga Salaadda meelo kale.
Samo falku inaad ah Umadda oo dhan
Abuu Hureyrah Radi anhu, in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Umadda inay Cumrada waa dembi ah u dhaxeeya, iyo Hajj Mabrur maayo xaqa ujuuro isaga u sii dheer tahay in Jannada." 
Ibn Mascuud Radi 'anhu, in Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Iringilah dhexeeya Xajka iyo Cumrada labada dembi dhimi kara iyo faqriga, iyo sidoo kale kabuufi dab ka saaraysaa nijaasta (miridhku) bir ah, oo dahab iyo lacag ah, mana jirto wax abaal marin Hajj Mabrur laakiin Jannada." 
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah, ayuu yiri, "waxaan maqlay Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ku alla kii sameeya Hajj si daacad ah u Alle aan naxariis lahayn oo kefasiqan, ka dibna uu dembi la'aan ku soo laabtay, sidii markuu dhashay by hooyadiis. '"
Ibn Cumar Radi 'anhuma, Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yidhi:
"Dadka ku dagaallami Jidka Eebe iyo dadkii la tagaan Xajka iyo Cumrada, waa ergay Ilaah. (Kuwa dhawrsaday) Ilaah u yeedhay, ay oofiya call. Iyo (markii) Goortaasay weyddiiyeen, Ilaah deeq (codsato). "
Dhinacyada Xajka iyo Cumrada waa Deymaha lagu fuliyey hal mar kusoo mara, Wixii kasta oo Muslim, Baligh, caaqil, Freedom awoodna
Hadalka Eebe imtithaal:
"Run ahaantii, guriga markii ugu horaysay la dhisay (meel cibaadada) waa ninkii ahaa in Bakkah Baitullah (Maka) waana barakaysanyahay waana Hanuunka aadanaha oo dhan. Isaga jiraan calaamado in dhabta ah, (kuwo kale) Station Ibraahim; Ruuxii u galeen rag sidaas (Baitullah ee), wuxuuna ahaa ammaan ah; samayn Hajj waa waajib ku ah nin Ilaah, in uu yahay, (waayo) dadka u safri kartaa Golaha. . Ruuxii diidi (waajibaadka Xajka), Eebe Mahakaya (uma baahnid wax) Caalamka "[Ali Cimraan: 9697]
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah, ayuu yiri, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii wacdiyaya naga dhex, ayuu yidhi:
"Waxaa waajib ah in aad Xajka korkiisa, markaas bixin saboolka ah (Xajka) ah." Sidaas waxaa la yidhaahdaa, "Ma sanad kasta, Rasuulkii Alle?" Markaas ayuu iska aamusay ilaa qofka waa in la odhan saddex jeer, ka dibna Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay, "Haddii aan odhan haa tahay, shaki la'aan wuxuu noqon doonaa deyn ah oo sida xaqiiqada ah ma waxaad awoodi doontaa in aad (sidaas la sameeyo)." Markaas ayuu yiri, "Anigu waan karaa sidaan idiinku ha. Sida xaqiiqada ah in dadka baabbi'inayay ka hor inta aadan wax badan si aad u weydiiso oo badan oo ku raacsanayn ay Nabiga. Haddii aan ku amray wax aad si, ka dibna aad u qabtaan sida ugu badan ee aad. Oo anigu haddii aan wax u diid, markaas ka tago. "
Ibn Cumar Radi anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Islam shan tiir saarnaa dushooda waxaa dhisay: (1) axdiga in Ilaah kale ma jiro waxa uu xaq u diibadahi si sax ah, laakiin Allah iyo in Muxammad waa Rasuulkii Eebe, (2) Ooga Salaadda, (3) Sakada, (4) Xajka Baydka ah, iyo ( 5) Ramadan soonka. '"
Laga soo bilaabo Ibn 'Abbaas anhuma, ayuu yiri, "Rasuulka sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Waa Xajka in aan leedahay maad u leh. Kuwa aanan heysan hadyu (allabari xoolaha) leeyihiin, markaas waa inuu guud ahaan bertahallul, sababta oo ah Xajka ayaa u yimid inuu Xajka tan iyo Maalinta Qiyaame. "
Of Shabi bin Ma'bad, ayuu yiri, "waxaan tegey inuu soo arko Cumar, ka dibna waxaan ku yidhi:
"O Taliyaha Mu'miniinta, dhab ahaantii waxaan lahaa diinta Islaamka, waana hubaa inaan anigu ahay Xajka mar hore khasab ah iyo Cumrada, Waxaan ahay, ka dibna waxaan bilaabay in ay ka shaqeeyaan labada caabuddaan iyaga." Markaas ayuu ku yiri, "Waa inaad helo tilmaamaha iyada si ay u hirgeliyaan Sunnah Nabiga. ' "
[Guuriyeen ka kitaabka Al-Wajiiz-adeerradood Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Author Shaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Issue Indonesia Guide Duruusta Buuxi, Tarjumaha Kooxda Tashfiyah LIPIA - Jakarta, Daabacaadda Ibn Kathir, oo daabacan Ramadan 1428 - September 2007M]
Posted by needsjobslowongankerja at 12:34 PM